काठमाडौं, ७ जेठ । सरकारलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्न सरकारकै शैलीमा अभ्यास गर्नु नै छाया सरकार हो । छाया सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई सरकारका मन्त्रीहरूले...
काठमाडौं, ७ जेठ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणको सिजन अहिले जारी छ । यो सिजनको दोस्रो विण्डो सोमबारदेखि सुरु भएको पर्यटन विभागले जनाएको छ । यो वर्षको आरोहण सिजनका लागि ३८१ जनाले परमिट लिएकोमा अहिलेसम्म झण्डै १५० जनाले...
सिरहामा वडाध्यक्षमाथि सार्वजनिक मुद्दा लगाएपछि विरोध
महेश सिंह महतो सिरहा, ६ जेठ । समान्य विवादमा सार्वजनिक मुद्दामामला गरेपछि कल्याणपुर ५ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र यादवले आपत्ति जनाएका छन । विद्यार्थी भर्ना विषयमा कल्याणपुर ६ मा स्थानीय श्रीचन साह (ललियावाला)ले मदिरा सेवन गरी अपशब्द प्रयोग गरेपछि विवाद...
काठमाडाैँ, ६ जेठ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहकी रुपन्देही नेतृ कल्पना सुवेदीले पार्टी परित्याग गरेकी छिन् । आइतवार प्रेस विज्ञप्ती मार्फत उनले विगतमा...
काठमाडौं, ६ जेठ । करिब १६ घण्टाको अवधिमा देशका विभिन्न ५ स्थानमा आगलागी हुँदा करिब ५६ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको धनमाल...
नयाँ दिल्ली, ६ जेठ । आम निर्वाचनमा चरणबद्ध मतदान सम्पन्न भएपछि, प्रारम्भिक मत सर्वेक्षणहरूले देखाएका नतिजालाई भारतका विपक्षी नेताहरूले अस्वीकार गरेका छन्। एक्जिट...
शान्ति सेनाको सहयोगमा लिवियाबाट १५ नेपालीको उद्धार
काठमाडाैँ, ६ जेठ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा युद्धग्रस्त मुलुक लिविया पुगी अलपत्र परेका १५ नेपाली नागरिकको उद्दार गरिएको छ । इजिप्टको कायरोस्थित...
जंगली च्याउ खाँदा लमजुङमा ३ जनाको मृत्यु
लमजुङ, ६ जेठ । जंगलको विषाक्त च्याउ खाँदा लमजुङमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । च्याउ खाँदा गम्भीर बिरामी परेका क्व्हालोसोंथर गाउँपालिका–९ गिलुङका ५० वर्षीय सुलबहादुर क्षेत्री, उनका १२ वर्षीय छोरा मन्तोष क्षेत्री र छिमेकी १० वर्षीय साजन क्षेत्रीको मृत्यु...
युपीएफ नेपाल र अमेरिका च्याप्टरबीच सम्झौता
समुदाय-प्रहरी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया
श्रोत नखुलेको नेपाली रुपैयाँ सहित पक्राउ
पर्वतमा घरभित्र बनाउँदै गरेको बम पड्कियो, दुई युवा घाइते
सुर्खेतमा प्रहरीद्वारा नौ वटा भरुवा बन्दुक बरामद
नेबिसंघ नेता दुर्गा कापडीले विद्यालयलाई पुस्तक प्रदान गरे
गर्ल्याम–गुर्लुम ढल्यो सुष्मा महराको ‘शासन’, व्यापारीहरूले लिए कठोर निर्णय
पूर्वराजपरिवारको ‘विदेश इपिसेन्ट’ थाइल्यान्ड किन बन्यो ?
नेकपा एकता : विद्यार्थीमा ऐन महर, युवामा दीपशीखा
न्युयोर्क, ७ जेठ । अमेरिकी कम्पनी गुगलले चीनको स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी हुवावेसँग साझेदारी टुंग्याउने घोषणा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार गुगलले अब हुवावेलाई सफ्टवेयर दिने छैन । रिपोर्टमा अमेरिकी सरकारले हुवावेलाई विश्वभरिबाट नै कालो सूचीमा राख्न माग...
काठमाडौं, ६ जेठ । ‘एनसेल छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता सम्मान’ कार्यक्रमलाई थप पाँच वर्षका लागि निरन्तरता दिन ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पससंग सम्झौता...
काठमाडौैँ, ६ जेठ । ओपोले फ्रेञ्च टेनिस फेडरेसन (एफएफटी)सँग सहकार्यका लागि सम्झौता गरेको छ । यससँगै ओपो अब तीन बर्ष (२०१९–२०२१)का लागि...
एनआईसी एशिया बैंक र एभरेष्ट अस्पतालबीच सम्झौता
कमलपोखरीमा मुक्तिनाथ बैंकद्वावा बगैँचा निर्माण
ताप्लेजुङ दुर्घटनामा दिवंगत सेनाका परिवारलाई मेगा बैंकको बीमा बापत ५ लाख रुपैयाँ
थाहा पाउनुहोस् आइतबार सुनचाँदीको मूल्य कति छ
महेश सिंह महतो लहान । प्रेम भूमिरीमा अधारित ‘मन्द–मन्द’ नेपाली चलचित्रको छायाँकन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चलचित्रको सस्पेन्स कथाकी नायिका कसिस दाहालले सुटिङको लागि कडा मेहनत गर्दै आएको बताएकी छिन् । ‘अनुशासनलाई आत्मसात् गर्दै काम गरिरहेको छु’, उनले...
रोज राणाको प्रश्न– ५० लाख पारिश्रमिक लिने हिरोले कति प्रतिशत व्यापार ग्यारेन्टि गर्छन् ?
स्तन शल्यक्रियापछि संसारकै सुन्दर अभिनेत्रीमा दरिएकी युवती
एकदिवसीय क्रिकेट इंग्ल्याण्डले जित्यो, पाकिस्तान ५४ रनले पराजित
नयाँदिल्ली, ६ जेठ । पाचौँ तथा अन्तिम एकदिवसीय क्रिकेटमा इंग्ल्यान्डले पाकिस्तानलाई ५४ रनले हराएको छ । इंग्ल्यान्डले दिएको ३ सय ५२ रनको लक्ष्य पछाएको पाकिस्तान ४६ ओभर ५ बलमा अलआउट हुँदै २९७ रनमा समेटियो...
बास्केटबल राष्ट्रिय खेलाडी श्रेया भन्छिन्– खेललाई करिअर बनाउन मुस्किल
फुटबल प्रशिक्षक संघले पूर्णता पायो, अब प्रभावकारी काम गर्ने प्रतिवद्धता
बायर्न म्युनिखले जित्यो जर्मन बुण्डेस लिगा फुटबलको उपाधि
विश्वकप क्रिकेट विजेताले चालीस लाख डलर पुरस्कार पाउने
अष्ट्रेलियन खेलाडी खेल छाडेर फरार
डच लिग फुटबलको उपाधि आयाक्सलाई
झापामा छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता आजदेखि शुरू हुँदै, महर्जनसहितको टोली प्रस्थान
अमेरिका । एनआरएनए अमेरिकाको सन् २०१९–२१ को कार्यकालका लागि सुनिलकुमार साह अध्यक्षमा विजयी भएका छन् । कुल खसेको ७ हजार ३ सय ५७ मतमा साहले ३७ सय ११ मत...
बुद्धजयन्तीः पोर्चुगलमा बृहत् शोभा यात्रा हुँदै
एनआरएनए अमेरिकाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी ईन्जाको प्रतिवेदन सार्बजनिक
चीनमा उत्तर कोरियाली महिला र बालिकाहरू यौन व्यवसायमा सामेल
लण्डन, ७ जेठ । चीनमा हजारौं उत्तर कोरियाली महिला तथा बालिकालाई यौन व्यवसायमा सामेल गरिएको प्रतिवेदन बाहिर आएको छ । लण्डनस्थित मानवअधिकारवादी समूहले प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनमा सो कुरा...
इजिप्टमा पर्यटक बसमा बम बिस्फोट, १६ जनाको मृत्यु
अष्ट्रेलियामा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा लिवरल पार्टीका उम्मेदवारको जित
पाँच वर्षे कार्यकालमा पहिलोपटक मोदीको पत्रकार सम्मेलन, अत्यधिक बहुमतसहित पुनः सत्तामा फर्कने
कुकुरको नाम सरकारी हाकिमसँग मिलेपछि पक्राउ
मोदीको मेकअपमा मासिक ८० लाख भारु खर्च !
काठमाडौं । बर्ड फ्लुका कारण सर्वसाधारणहरू डराएका छन् । एक जनाको काभ्रेमा मृत्यु भएपछि झन् यो रोगका बारेमा धेरै सर्वसाधारणहरू सर्तक भएका छन् । एभियन इन्फ्लुइन्जा, जसलाई सामान्य भाषामा...
बर्ड फ्लू के हो ? यसरी बच्न सकिन्छ बर्ड फ्लूको संक्रमणबाट
मधुमेह, उच्च रक्तचाप र कोलेस्ट्रोल भएकाले दूध नपिउने
पोलिटब्युरो सूची संशोधन गर्न नेकपा नेतृत्वमाथि दबाब, पूर्वएमालेमा राजेन्द्र राई र ठाकुर गैरेको नाममा अडान
मदन भण्डारीको ‘जबज’ विद्यादेवी भण्डारीले नै मान्नु भएन (भिडियो)
मदन भण्डारीकी छोरी उषाले यसरी गरिन् दासढुङगा हत्याकाण्डको पर्दाफास (भिडियो)
सत्तारुढ नेकपा र कांग्रेस नेताहरूबीच हातहालाहाल, उजुरुक्कै उठेर पाखुरा…(भिडियो)
पत्रकार ऋषि धमलाले पत्नी एलिजालाई पिटेकै हुन् ? यसो भन्छन् विश्वप्रकाश शर्मा (भिडियो)